Android Wear, midina ary tsy misy frein | Avy amin'ny mac aho
Ny toerana misy an'i Google manana ny tombony amin'ny ecosystem finday dia antony lehibe kokoa noho ilay goavambe fikarohana sy ekolojika finday hidoboka hatrany amin'ny famoronana rafi-pandidiana ho an'ny akanjo azo entina izany fitaovana hato-tanana izany izay nanomboka nalaza tamin'ny mpampiasa i Pebble.
Saingy nandritra ny taona maro, ireo tovolahy avy any Mountain View dia nahita ny fetra napetraka amin'ny mpanamboatra raha ny amin'ny fanaingoana ny kinovan'ny Android Wear amin'ny fitaovany, miaraka amin'ny fisintomana kely ananan'ireto fitaovana ireto, dia nanery ireo mpanamboatra sasany hampijanona ny filokana tsy vetivety fotsiny amin'ity sehatra ity, toy ny tranga Motorola, iray amin'ireo miloka aminy voalohany.
Ny fanavaozana lehibe farany an'ny Android Wear dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny Mey tamin'ny taon-dasa Tamin'ny fiandohan'ity taona ity vao nanomboka nahatratra fitaovana hafa mifanentana aminy. Nanomboka teo dia tsy nisy zavatra fantatra kely momba ny tokony ho izy amin'ny taranaka fahatelo amin'ny Android Wear.
Ny vaovao tokana mifandraika amin'ny fivoaran'ny sehatra ity dia hita ao amin'ny Fandaozana ny lohan'ny injeniera Android Wear, izay nanjary ampahany tamin'ny mpiasan'ny Stripe, sehatra fandoavam-bola amin'ny finday.
Fialana amin'ny lohan'ny injeniera manamafy fa mila fanamboarana tanteraka ny Android Wear, tsy amin'ny asany ihany fa amin'ny fanomezana fahalalahana bebe kokoa an'ireo mpanamboatra izay misafidy ny hampiasa azy. Ny watchOS an'i Apple sy Tizen an'i Samsung izao no sehatra be mpampiasa indrindra, ambonin'ny Android Wear.
Raha mbola tsy mampiseho mariky ny fiainana i Google, dia mety ho amin'ny ho avy tsy ho ela, ireo mpanamboatra izay manohy miloka amin'ny smartwatches, misafidy ny hifampiraharaha amin'ny Samsung ary manomboka mandray ny rafitra fiasan'ny orinasa koreana, rafitra miasa izay manome fanjifana nohatsaraina kokoa, fampisehoana tsaratsara kokoa ary manana fampiharana be dia be ankehitriny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Android Wear, midina ary tsy misy frein
Ny fikambanana ATTAC dia mibodo ny Apple Store any Paris